Techchnology Archives - Akhayar Media - Myanmar Lifestyle, Tech Review, Food Review
စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် Selfie Camera က ဘယ်လောက်အရေးပါသလဲ?
စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် Selfie Camera က ဘယ်လောက်အရေးပါသလဲ? စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ရာမှာ ဦးစားပေးမှုတွေ ပြောင်းလဲသွားချိန်မှာ လူအတော်များများရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ selfie ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရက ရေပန်းစားလာပါတယ်။ ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေကလည်း ဒီအချက်ကို အမိအရ ဆုပ်ကိုင်ပြီး သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေမှာ ထည့်သွင်းလာကြတာကို တွေ့ရမှာပါ။ Selfie အကြောင်းပြောရင် ဒီယဉ်ကျေးမှုကို အာရုံစိုက်လွန်းတဲ့ Brand တစ်ခုအကြောင်းကလည်း ပြောစရာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများ သိကြတဲ့ Vivo ပါ။ V5, V5 plus တွေတုန်းကလည်း Selfie အသားပေးခဲ့သလို ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှာ မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ V7+ ကလည်း Selfie အသားပေး စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ V7+ […]
Xiaomi Mi Max ဖုန်းတွေအတွက် MIUI9Global ROM ကို Update ပြုလုပ်နိုင်ပြီ
Xiaomi Mi Max ဖုန်းတွေအတွက် MIUI9Global ROM ကို Update ပြုလုပ်နိုင်ပြီ Xiaomi ကနေ သူ့ရဲ့ Xiaomi ဖုန်းတွေအတွက် MIUI9Operating System အသစ်ကို စတင်ထုတ်ပေးနေတာ အချိန်အနည်းငယ်ခန့် ကြာသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိအချိန်မှာ MIUI9Update ကို China ROM အသုံးပြုနေတဲ့သူတွေအတွက်ပဲ ရရှိလာတာဖြစ်ပြီးတော့ Global ROM တွေအတွက်တော့ အခုအချိန်အထိ စောင့်ဆိုင်းနေရတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ မနှစ်တုန်းက စတင်ရောင်းချခဲ့တဲ့ Xiaomi ရဲ့ အရောင်းသွက်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Xiaomi Mi Max စမတ်ဖုန်းအတွက် MIUI […]
[ Zawgyi ] 2018 မှာ Android ဖုန်းအတော်များများ Video ကို 4k HDR Resolution ဖြင့် ရိုက်ကူးနိုင်မည်။ မကြာသေးမီက မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Qualcomm 845 Chipset မှာ စွမ်းဆောင်ရည် ၊ Battery နှင့် Modern တို့အပြင် Camera နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အပိုင်းတွေမှာလည်း အဆင့်မြှင့်တင်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Qualcomm ရဲ့ပြောကြားချက်အရ Snapdragon 845 Chipset ဟာ Battery စွမ်းအင် အသုံးပြုမှုနည်းပါးပြီး Camera နဲ့ Video ရိုက်ကူးမှုအပိုင်းမှာ အများကြီးကောင်းမွန်တိုးတက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ 2018 မှာတွေ့ရှိရမယ့် Qualcomm ရဲ့အထူးခြားဆုံး Feature တစ်ရပ်အနေနဲ့ကတော့ […]
Android 8.1 Oreo Version အသစ်ကို စတင်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ Google
Android 8.1 Oreo Version အသစ်ကို စတင်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ Google Google ကနေ နောက်ထပ် Android Oreo Version အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Android 8.1 ကိုထုတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခုထွက်ရှိလာတဲ့ Android Version 8.1 ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ Google Pixel နဲ့ Nexus Devices တွေအတွက်ပဲ အသုံးပြုနိုင်ဦးမှာဖြစ်ပြီးတော့ အခြားသော Devices တွေအတွက်ကတော့ မရရှိနိုင်သေးပါဘူး။ အခုထွက်ရှိလာတဲ့ Android Version 8.1 မှာ ယခင် Android 8.0 Oreo နဲ့ ကွာခြားမှုအရတော့ Bluetooth Devices တွေရဲ့ Battery ပမာဏကို […]
Apple ကိုအမှုရှုံးခဲ့တဲ့ Xiaomi
[ Zawgyi ] Apple ကိုအမှုရှုံးခဲ့တဲ့ Xiaomi Xiaomi ဟာ ၄င်းတို့ရဲ့ Product တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mi Pad ကို အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံအတွင်းဖြန့်ချိနိုင်ရန်အတွက် “Mi Pad” ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ အရှေ့ ဥရောပနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဥာဏမူပိုင်ခွင့်ရုံး (EUIPO)မှာအဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဆိုကို Apple က ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီး အကြောင်းအရင်းကတော့ အသုံးပြုသူတွေဟာ Mi Pad ကို “My Pad” လို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ် ၊ “My Pad” ဟာ “i Pad” နဲ့ သံတူကြောင်းကွဲဖြစ်နေတဲ့အတွက် လက်မခံနိုင်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ EU ရဲ့ အထွေထွေတရားရုံးကတော့ Apple ရဲ့တင်ပြချက်ကို မှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံပေးခဲ့ပြီး Xiaomi […]
Bitcoin နဲ့ ဝယ်ယူခွင့်မပေးတော့တဲ့ Steam
Bitcoin နဲ့ ဝယ်ယူခွင့်မပေးတော့တဲ့ Steam Bitcoin ဟာ ယခုနှစ်မှာ ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများစွာဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ စံချိန်တင်ဈေးနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒေါ်လာ ၁၃၀၀၀ ကျော်အထိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါက ယခုနှစ်စတုန်းကဈေးနှုန်းဖြစ်ထက် ဒေါ်လာ ၉၀၀ ကျော်နဲ့ ယှဉ်ရင် ၁၃ ဆလောက်ကို ပိုမိုများပြားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး အပြောင်းအလဲအရအလွန်မြန်ဆန်နေတဲ့အတွက် Bitcoin ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ လူစိတ်ဝင်စားမှုအခံရဆုံး Online ငွေကြေးတစ်ခုဖြစ်နေပြီး အချို့သောသူတွေဟာဆိုရင် Bitcoin Mining ပြုလုပ်ဖို့တောင် စတင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အချို့သော ကုမ္ပဏီတွေအတွက်ကတော့ အခုလိုမျိုး ဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်တာက ဆိုးရွားတဲ့အချက်ဖြစ်နေပြီး Value ကုမ္ပဏီကနေ သူရဲ့ Steam Store မှာ Bitcoin နဲ့ ဝယ်ဖိုိ့ကို ပိတ်ပင်လိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ […]
Video Platform နယ်ပယ်မှာ YouTube ကို ကျော်တက်သွားနိုင်တဲ့ Facebook
Video Platform နယ်ပယ်မှာ YouTube ကို ကျော်တက်သွားနိုင်တဲ့ Facebook သင် Facebook က Snapchat ထက်ပိုပြီး အောင်မြင်လာပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေကို ကြားဖူးကောင်းကြားဖူးမှာပါ။ မှန်ပါတယ် – Facebook ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ အအောင်မြင်ဆုံး Social Media တစ်ခုဖြစ်လာပြီး မကြာမီအချိန်တစ်ခုအတွင်းမှာ လက်ရှိ Video Platform တွေထဲမှာ အကြီးမားဆုံးဖြစ်နေတဲ့ YouTube ကိုပါ ကျော်တက်သွားတော့မှာပါ။ ဒါပေမယ့် Facebook မှာ ပုံမှန်မြင်နေရတဲ့ Videos တွေက YouTube ကိုကျော်တက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Facebook ကနေ အခုအချိန်မှာ စတင်စမ်းသပ်နေတဲ့ Product တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Facebook Watch က […]
Huawei Mate9အတွက်Android Oreo ပါဝင်တဲ့ EMIU 8.0 Version သစ်ထွက်ရှိ
[ Zawgyi ] Huawei Mate9အတွက်Android Oreo ပါဝင်တဲ့ EMIU 8.0 Version သစ်ထွက်ရှိ Huawei Mate9အတွက် Android Oreo (Version-8.0) ကို Beta tester အနေနဲ့ November လကုန်အထိ Beta member အချို့ကို စမ်းသပ်အသုံးပြုနိုင်ရန် နောက်ဆုံး အနေနဲ့ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ Official Update ( Stable Version ) ကိုထုတ်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်လို့ Mate9အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ ခုချိန်မှာ Huawei Mobile Services app ကနေတစ်ဆင့် စစ်ကြည့်လို့ရနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ […]
၁၃ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေအတွက် Messenger Kids Application ကို ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ Facebook
၁၃ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေအတွက် Messenger Kids Application ကို ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ Facebook Facebook ကနေ အသက် ၆ နှစ်နဲ့ ၁၂ နှစ်ကြား ကလေးငယ်တွေအတွက် Messenger Kids အမည်ရှိတဲ့ Application တစ်ခုကို ထုတ်ပေးလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Messenger Application ဟာ Facebook Account ရှိစရာမလိုအပ်ပဲ မိဘတွေနဲ့ မိသားစုတွေရဲ့ Account ကနေ တစ်ဆင့်ထိန်းချူပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Facebook ကတော့ အဆိုပါ Application ဟာ အသက်ငယ်ရွယ်သေးတဲ့ ကလေးငယ်တွေ Social Network အပေါ်မှာ စိတ်ဓါတ်ပျက်ပြားမှုမရှိစေပဲနဲ့ Social Media အပေါ်ကို စတင်အကျွမ်းတဝင်ရှိလာအောင် […]
ခမ်းနားစွာကျင်းပခဲ့တဲ့ “သီတင်းကျွတ်ပွဲတော် Samsung နဲ့ တူနွှဲပျော်” ကံထူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲ
ခမ်းနားစွာကျင်းပခဲ့တဲ့ “သီတင်းကျွတ်ပွဲတော် Samsung နဲ့ တူနွှဲပျော်” ကံထူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲ Samsung ကုမ္ပဏီကနေ Samsung Electronics & Mobile Devices တွေကို ဝယ်ယူအားပေးတဲ့ Customers တွေကို အမြဲတမ်းတမ်းလိုလို ပြန်လည်ပြီးကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့ အစီအစဉ်တွေအမြဲတမ်းလိုလို ပြုလုပ်နေလျက်ရှိပါတယ်။ အခုလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ကနေ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ “သီတင်းကျွတ်ပွဲတော် Samsung နဲ့ တူနွှဲပျော်” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ရဲ့ ကံထူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲအခမ်းအနားကို Akhayar အဖွဲ့သားတွေအနေနဲ့ တက်ရောက်သတင်းယူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ “သီတင်းကျွတ်ပွဲတော် Samsung နဲ့ တူနွှဲပျော်” ဟာဆိုရင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်ကာလအတွင်းမှာ Samsung ရဲ့ တီဗွီ၊ […]
Snapdragon 845 Chipset ကို ဒီဇင်ဘာလအစောပိုင်းမှာမိတ်ဆက်ဖွယ်ရှိသည့် QUALCOMM
[ Zawgyi ] Snapdragon 845 Chipset ကို ဒီဇင်ဘာလအစောပိုင်းမှာမိတ်ဆက်ဖွယ်ရှိသည့် QUALCOMM Qualcomm ကုမ္ပဏီဟာ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ Snapdragon 845 Chipset အသစ်ကို ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာကျင်းပမယ့် Snapdragon နဲ့ပတ်သက်တဲ့ နည်းပညာပြပွဲမှာ မိတ်ဆက်သွားဖွယ်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ Chipset ကို Battery သုံးစွဲမှုသက်သာစေရန်အတွက် စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုနည်းပါးသည့် ” 10nm Low Power Early process”နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ 845 Chipset အနေနဲ့ Graphic ပိုင်းကို Andreno 630 အထိGeneration တိုးမြှင့်ပေးလိုက်ပြီး Modem ကလည်း X20 ဖြစ်သွားပါတယ်။Modem X20 ကြောင့် Download speed […]
ကမ္ဘာကြီးကို အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ ကလေးဟက်ကာ (၅) ကောင်
လူကြီးတွေပဲ Hacker ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ထူးချွန်တဲ့ ကလေး Hacker တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ကွန်ပျုတာကျွမ်းကျင်တဲ့အပြင် ကမာ့အန္တာရယ်အရှိဆုံး Hacker အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရတဲ့ ကလေး (၅) ယောက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ Reubebn Paul Reuben Paul ဟာ Texas ပြည်နယ် Austin မှာရှိတဲ့ School မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းနေစဉ်မှာ Reuben ရဲ့ အတန်းဖော်သူငယ်ချင်းတွေဟာ ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားတာကိုပဲ စိတ်ဝင်စားနေကြပေမယ့် Reuben ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သူ့ကိုယ်သူတစ်နေ့မှာ Ethical Hacker အဖြစ်မိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ထားတဲ့ Device ကတော့ စမတ်ဖုန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းပွဲတစ်ခုမှာ Reuben ဟာစမတ်ဖုန်းအသုံးပြုတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သရုပ်ပြတာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင် […]
News Techchnology Uncategorized
Apple User တွေကို အနည်းငယ်ခနဲ့လိုက်တဲ့ Samsung ရဲ့ ကြော်ငြာ
Apple User တွေကို အနည်းငယ်ခနဲ့လိုက်တဲ့ Samsung ရဲ့ ကြော်ငြာ Apple iPhone တွေအသစ်ထွက်တိုင်း Apple Store တွေရှေ့မှာ ညလုံးပေါက်စောင့်ပြီး ဝယ်ယူသူတွေက တကမ္ဘာလုံးမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်တုန်းက iPhone စတင်ထွက်ရှိထဲက ဖြစ်နေကြအရာတစ်ခုပါ။ iPhone အသစ်ဝယ်ကိုင်တိုင်း ကြွားနေရလောက်အောင်ကို ဖုန်းတွေထဲမှာ Standard တစ်ခုလို သတ်မှတ်ကြပေမယ့် Samsung ကတော့ အဲ့ဒါကို ဟာသအနေနဲ့ပဲ ယူဆနေပုံပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် Samsung Mobile US က သူတို့ရဲ့ Twitter Page မှာ “Grow up with an upgrade to Galaxy” ဆိုပြီး […]
Samsung Note7နှင့် ဆင်တူသော Mi Note2ကို Xiaomi ကြေညာ
Samsung Note7နှင့် ဆင်တူသော Mi Note2ကို Xiaomi ကြေညာ Xiaomi မှ Mi Note ၏ ဒုတိယမျိုးဆက် Mi Note2ကို ယနေ့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Mi Note2ရဲ့ ဒီဇိုင်းဟာ Samsung Galaxy Note7နဲ့ တော်တော်လေးဆင်တူတာကိုတွေ့ရပြီး Note7လိုပဲ ကွေးညွတ်တဲ့ မျက်နှာပြင်နဲ့ ပွဲထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Mi Note2ဟာ ယနေ့ထွက်ရှိနေတဲ့ High End ဖုန်းတွေထက် ပိုပြီး High End […]
Samsung Galaxy Note 8 ကို အပြတ်အသတ်အနိုင်ယူသွားတဲ့ iPhone X
Samsung Galaxy Note 8 ဖုန်းဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ Qualcomm Snapdragon 835 Processor နဲ့ RAM 6GB အထိပါဝင်တဲ့အတွက် လက်ရှိ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေထဲမှာ အမြန်ဆုံးသောဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Apple iPhone X ဟာ Samsung Galaxy Note 8 ကို ရှိတယ်လို့တောင် မသတ်မှတ်တော့ပဲ အပြတ်အသတ်ကို စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာ အနိုင်ပိုင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုးစမ်းသပ်တာက နာမည်ကြီး Benchmark တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Geekbench ကနေ စမ်းသပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Apple iPhone X မှာ ပါဝင်လာတဲ့ A11 Bionic Chip ရဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို […]
မျက်နှာပြင်အပြည့် စမတ်ဖုန်းခေတ်ကို FHD+Display ဖြင့်ဖန်တီးပုံဖော်လိုက်တဲ့ OPPO F5 Youth
မျက်နှာပြင်အပြည့် စမတ်ဖုန်းခေတ်ကို 6လက်မ အရွယ် FHD+ မျက်နှာပြင် Display ဖြင့်ဖန်တီးပုံဖော်လိုက်တဲ့ OPPO F5 Youth [ ZAWGYI ] OPPO က မြန်မာပြည်မိုဘိုင်းဈေးကွက်အတွက် စမတ်ဖုန်းသစ်တစ်လုံးဖြစ်သော F5 Youth မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကို ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလ ၁၅ရက်နေ့တွင် LOTTEL Hotel ၌ကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီး OPPO ၏ Ambassador သစ်ဖြစ်သော ရွှေမှုံရတီနှင့်အတူ OPPO Customer Relations Ambassador များဖြစ်ကြသည့် X-box၊ ပိုင်တံခွန်တို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ OPPO F5 Youth ဖုန်းကို နိုဝင်ဘာလ ၁၆ရက်မှ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ရက်အထိ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ OPPO […]